> Resource> iPhone> Olee otú iji weghachi iPhone mgbe Jailbreak
N'ụzọ ọ bụla iji weghachi m iPhone 4 ọdịnaya mgbe jailbreak?
M nwere m iPhone 4 jailbroken. Mgbe ahụ, ndị niile ọdịnaya nke m iPhone 4 furu! M mkpa m kọntaktị azụ ngwa ngwa. Ọ bụ nnọọ m mkpa. Bụ n'ebe ọ bụla otú ahụ ka m nwere ike iweghachi m iPhone na-enweta ọdịnaya azụ? Ekele advace.
Ọ bụrụ na ị synced gị iPhone na iTunes tupu jailbreak, ọ bụghị ihe a nsogbu. Ị nwere ike iji iPhone ndabere extractor na-azụ gị niile ọdịnaya, gụnyere kọntaktị, foto, videos, SMS, ndetu, akpọ akụkọ ihe mere, wdg Ma, otu ihe i kwesịrị iburu n'uche bụ na ọ bụghị ka mmekọrịta gị iPhone na iTunes mgbe ị kwụsịrị niile ọdịnaya, ma ọ bụ gị aga na data ga-overwritten na ị gaghị ebi na ya azụ. N'iburu nke a n'uche, ka ego zuru ezu nzọụkwụ n'okpuru ọnụ.
Olee otú iji weghachi gị iPhone mgbe a jailbreak
Nke mbụ niile, na-enweta ihe iPhone Iweghachi ngwá ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị otu ma, ị nwere ike m nkwanye ebe a: Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (n'ihi na Windows ọrụ), a pụrụ ịdabere na omume na-enye gị ka ịhụchalụ na naghachi gara aga kọntaktị, SMS, ndetu, photos, videos na ndị ọzọ. Ndị a niile na-ewe gị ọtụtụ nzọụkwụ iji weghachi iPhone si jailbreak.
Download free ikpe version nke iPhone weghachi software n'okpuru nwere a-agbalị.
Cheta na: Ọzọkwa, ma nsụgharị nke usoro ihe omume na-ekwe ka ị ndabere iPhone data na kọmputa tupu ị hapụ ya, na weghachite ya mgbe ị na-atụfu ya.
Ọzọ, ka na-na Windows version nke Wondershare Dr.Fone maka iOS dị ka a na-agbalị na nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Họrọ a mgbake mode na wepụ iTunes ndabere
Mgbe wụnye usoro ihe omume, na-agba ya na kọmputa gị na ị ga-esi na window n'okpuru.
Ebe a niile gị iPhone ndabere faịlụ na-achọta na egosipụta na-akpaghị aka na ndepụta. Họrọ onye na ọhụrụ ụbọchị na pịa "Malite iṅomi" wepụ keerughi ndabere.
Nzọụkwụ 2. RestoreiPhone 6 Plus / 6 / 5C / 5S / 5 / 4S / 4 / 3GS si jailbreak
Tupu mgbake, ị nwere ike ihuchalu niile gara aga ọdịnaya otu otu ikpebi onye ị chọrọ, mgbe ahụ akara ndị ị chọrọ na pịa "Naghachi". Na ị na-eweghachiri ha niile ugbu a.
Ya mere, ndabere dị ezigbo mkpa, n'agbanyeghị na ị na-eji iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, ma ọ bụ nsụgharị ndị ọzọ. Ọ na-ewe gị a nkeji ole na ole, ya mere, mee ndabere gị iPhone mgbe.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ mbubata natara kọntaktị, video na foto azụ gị iPhone, i nwere ike iji Wondershare TunesGo ime ya ole na ole clicks.
Olee otú mmekọrịta Google Ndi ana-akpo na kalenda na iPhone
Olee otú Detuo iPhone Ndi ana-akpo ka Computer na / enweghị iTunes
Otú nyefee iPhone Photos